Wasiirka Waxbarashada oo Sanatarada Aqalka Sare ugu jira Puntland u fasiray hadalkii dhawaan kasoo yeeray – Kalfadhi
Wasiirka Waxbarashada Soomaalya, Cabdullaahi Goodax Barre, ayaa sheegay in siyaasiyiin aan xil ka hayn Dowladda Federaalka ay si qaldan u turjimeen war uu dhawaan ku sheegay in ardayda Puntland ay saameyn doonto go’aan uu sheegay iney Puntland ku gaartay in aysan ardayda deegaannadeeda gelin imtixaan ay wasaaraddiisu u diyaarisay sanadkan ardayda dhameysaneysa Dugsiga Sare.
“Ujeedadu ma ahayn inaan iraahdo shahaadada Puntland qald weeye” ayuu Wasiir Gooda ku yiri shirjaraa’id oo ay si wadajir ah u qabteen maanta isaga iyo Sanatarada Puntland ugu jira Aqalka Sare, kuwaas oo ay wada yeesheen kulan uu ku fasirayey hadalka dhawaan ka soo yeeray ee ay Puntland-na dhibsatay. “Nuxurka warkeygu waxa uu ahaa inaan iraahdo shahaado aan meel lagu qaaday, sida lagu qaaday, cidda qaadday iyo sida loo saxay aanaan ogeyn kama marqaati ahaan karno inaan niraa shahaadaa jirto” ayuu hadalkiisa raaciyey
Wasiirku waxa uu sheegay in ay wasaaraddiisa iyo Puntland ku kala tagsan yihiin mabda’, laakiin muusan cadeyn waxa uu mabda’aasi yahay. “Arrinta imtixaanka ee leysla mari waayey waxay ahayd arrin mabdi’iyan ah- ma ahayn farsamo” ayuu yiri Cabdullaahi Goodax. “Mabda’yo adag ayaa la kala istaagay” ayuu hadalkiisa raaciyey. “Ma rabo inaan eedeeyo, laakiin Puntland inaan wax isla weynaba ma ahayn” ayuu, sidoo kale yiri Wasiir Goodax.
Waxa uu sheegay in kulanka dhex maray isaga iyo Sanatarada Puntland aysan go’aan ku qaadan, oo waxa uu sheegay in aysan Sanataradu go’aan u qaadi Karin Puntland, taasna waxaa qiray Sanatar Maxamed Axmed Mashruuc oo yiri “Anagu ma nihin ciddii go’aanka gaari lahayd oo Wasaaradda (Puntland) baa iska leh”. Wuxuuse sheegay in si leysu fahmo ay fududeynayaan.
“Xubnaha Sanatarada ee Guddiga Arrimaha Bulshada ee Aqalka Sare runtii meel fiican ayey wax dhigeen” ayuu yiri Wasiirka Waxbarashada. “Is-afgarad fiicanna iney suuragelin karaan aad baan u aaminsanahay” ayuu hadalkiisa raaciyey. Waxa uu sheegay in meeshii ay Wasaaraddiisa iyo Puntland kala taagnaayeen ay isaga soo dhawaadeen. “Waaan hubaa, waana ku kalsoonahay inuu xal imaanaayo” ayuu yiri Wasiir Goodax.